Tontolon’ny Bilaogy Swahili: Madonna, Fanomezana Herinaratra, Mpangalatra Tsy Mahay Mamaky Teny Sy Manoratra · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 12 Aogositra 2017 9:32 GMT
Mamintina ny fihetseham-pony i Chemi Che Mponda mikasika ny tsikera mahazo an'i Madonna amin'ny fananganana zaza Malawita, David Banda:
Ao amin'ny tranom-pianakavian'i Madonna ao Angletera i David nanomboka tamin'ny tapaky ny volana Oktobra. Niteraka adihevitra momba ny fahantrana, kamboty sy ny fananganan-jaza ao Afrika ny fananganana azy. Mbola manohitra ny maha ara-dalàna ny dingana nanaovana ny fananganana an'i David ireo vondrona mpiaro ny zon'olombelona ary mampanantena fa ho foana ny didim-pitsarana.
Manoratra momba izany olana izany, manontany i Simon Kitururu hoe: Dokambaratra ve? Tsara kokoa ve ny fananganan-jazan'ny mpanakanto mpanankarena noho ny miaina ao amin'ny trano fitaizana zaza kamboty? Ary ahoana ny fifandraisan'i David amin'ny fianakaviany sy ny kolontsainy?
Mbola tsy mifarana ny krizin'ny herinaratra ao Tanzania, na dia eo aza ny fahatongavan'ireo milina mpamokatra herinaratra roa vao haingana tao Dar Es Salaam. Nanery an'i Tanzania mba hiantehitra amin'ny fitantanana henjana amin'ny fanomezana herinaratra ny krizin'ny herinaratra mampihitsoka ny firenena. Voalaza fa tsy misy dikany ireo milina mpamokatra herinaratra roa satria maoteram-piaramanidina antitra tsy azo natao na inona na inona intsony!
Charahani indray miampanga ny fikasan'ny governemanta Tanzaniana hanao fifanekena amin'ireo orinasa tsy mahavita azy mba hitantanana tetikasam-pirenena lehibe. Ohatra vao haingana indrindra nosoratany ny Orinasa Richmond Development, izay niaiky fa tsy manana tahirim-bola ampy hanomezana milina mpamokatra herinaratra vonjimaika roa ho an'i Tanzania.
Bilaogera miteny Swahili iray hafa sady mpanao gazety malaza any Tanzania, Maggid Mjengwa, nampitaha ireo mpitarika Tanzaniana mpanao kolikoly sy tsy mahavita azy ho mpangalatra tsy mahay mamaky teny sy manoratra. Milaza tantarana mpampita hafatra telo tsy mahay taratasy izay nangalatra akondro nanirahana azy ireo tokony haterina i Mjengwa, tsy mahalala fa ny taratasy tokony naterin'izy ireo miaraka amin'ny akondro dia milaza ny isan'ny akondro. Tohina izy ireo raha nahita fa fantatr'ilay tompony ny tsy fahampian'ny akondro. Mihevitra fa tsy maintsy misy mijery ny taratasy, rehefa nirahana fanindroany izy ireo dia nanapa-kevitra hanisy tany ao amin'ny taratasy amin'izay hono tsy hita ny halatr'izy ireo!
Jikomboe mampahatsiahy ireo bilaogera Afrikanina momba ny Fihaonamben'ny Bilaogera Afrikanina 2007. Maniry izy mba hiditra ao amin'ny vondrona google izy ireo ary hampiasa ny wiki ho fanomanana.
Funguajicho indray nampiseho rohy tamin'ny takelaka tao amin'ny gazety Ogandey, the New Vision, manondro ny filohan'i Tanzania teo aloha, Benjamin Mkapa, ho iray amin'ireo mety handresy amin'ny loka vaovao omena ny filoham-pirenena Afrikanina misotro ronono.